Dzimwe nhengo dzebato rePeople's Democratic Party, PDP, dzinoti dzadzinga mutungamiri webato iri, VaTendai Biti, nevamwe vakuru vakuru nekuda kwekusawirirana panyaya yekuita mubatanidzwa nemamwe mapato.
Vachizivisa nezvedanho iri kuvatori venhau mushure memusangano wavati ndewe General Council yebato ravo muBulawayo neChina masikati, munyori mukuru wePDP, VaGorden Moyo, vati bato ravo ratora danho rekusarudza vamwe vatungamiri vatsva sezvo VaBiti nevamwe vavo vakabuda mubato iri apo vakapinda mumubatanidzwa weMDC Alliance vasina kubvumidzwa nebato.
VaMoyo vati Amai Lucia Matibenga ndivo vave mutungamiri webato iri vachitevedzerwa naVaSikhumbuzo Ndiweni, chinove chigaro change chiina VaKucaca Phulu.
Vachipindura mubvunzo wekuti vadzingwa ava vaive vaziviswa here nezvedanho iri kana kupiwa mukana wekupindura, mubati wehomwe webato iri, VaBenson Ntini, vati VaBiti nevamwe vavo vakazvidzinga vega mubato nekupinda mumubatanidzwa weMDC Alliance vasina kupiwa mvumo.
Amai Matibenga vati vari kufara kuti vapiwa mukana wekutungamira PDP uye vachave mutungamiri anoteerera zvido zvevanhu.
Amai Matibenga vati bato ravo richatsvaga mushandirapamwe nemamwe mapato asi bato ravo risingamedzwe.
Vamwe vanonzi vadzingwa mubato vanosanganisira Amai Evelyn Masaiti, mutauriri webato iri, VaJacob Mafume, VaSettlement Chikwinya, VaWillias Madzimure naVaWilstaff Sitemere.
Asi VaMafume vati hapana ane simba rekudzinga vanhu vakasarudzwa nekongiresi yebato. Vatiwo bato ravo riri kuita musangano mukuru neChishanu uyo uchabuda nechisungo pane zvaitwa naVaMoyo nevamwe vavo.
Mumwe wevatsigiri veDPD ari kudivi raVaMoyo, Amai Doreen Sithole, vati vari kufara sezvo bato ravo ratora danho rakanaka.
Sezviri kuitika mune mamwe mapato akapinda mumubatanidzwa weMDC Alliance mubato rePDP mange mune makakatanwa vamwe vatsigiri nevakuru vakuru vasingawirirane nemubatanidzwa uyu.